Razzamataz | Franmụaka Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Razzamataz Franchise
E guzobere Schoolslọ Akwụkwọ Ihe Ralọ ihe nkiri nke Razzamataz na 2000 ma na-enye ọzụzụ pụrụ iche n'ịgba egwu, ihe nkiri na ịbụ abụ ọnụ na ohere ndị na-enye obi ụtọ ịme.
Mgbe ngosipụta nke BBC Dragons 'Den yana mbinye aka si Duncan Bannatyne, ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ gbara ama na mmekọrịta dị elu.
Ka mmasi gi maka ime ihe mee ka ubuo gi nke Razzamataz Franchise!
E kere Razzamataz site na nrọ dị mfe, iji mee ka ndị na-eto eto nwee ike ịme ihe nkiri n'agbanyeghị agbụrụ ha ma ọ bụ ọnọdụ ha. Anyị chọrọ inye ụmụaka nọ ebe niile ohere ịbịa na klas nke ndị na-eme ihe nkiri nwere ahụmahụ na-akụzi, ndị nwere ike inye ha mmeghe zuru oke na ụlọ ọrụ kachasị ebube n'ụwa! Iji mee nke a, anyị enyerela aka na klaasị dị ọnụ ala, usoro ọmụmụ anyị bụ ihe ụtọ ma dịkwa ugbu a, ị na-abịa klas anyị ka ọ dị mfe. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị emepụtala usoro azụmahịa nke na-enyere aka belata ọnụ ala yana ọnụ ọgụgụ klaasị elu, na-ebubata klas anyị n'obodo na obodo nta yana obodo ndị buru ibu. E guzobere azụmahịa anyị na 2000 ma bụrụkwa nke ndị BBC Dragons 'Den na-akwado ya na 2007. Taa ịsụ asụsụ na-enye anyị ohere iru nrọ anyị, n'ihi na ọ na-enye onyinye kachasị mma n'ofe mba ahụ ohere ịnwe ma jikwaa azụmahịa na-aga nke ọma ebe ọ na-eso usoro ịnwale. Ọ pụtakwara na ndị franchise anyị nwere ike ịtọlite ​​ụlọ akwụkwọ ha n'ọnụ ụzọ nke aka ha, wee wetara ntorobịa nke mpaghara ha agụụ, nka na ntinye onwe ha.
Soro ndị otu egwuregwu na-emeri ọtụtụ mmeri!
Ndị mmeri nke British Franchise Association 'Franchisee nke Afọ 2018 ′ &' Ndụ Franchisee nke Afọ 2018 '
5 Onyinye afọ ojuju nke afọ nke abụọ na-agba ọsọ!
ndị otu bfa so
Ginggba ụmụ nwanyị ume ịbanye na ndị otu so na Franchising
Ndị otu na-eme ihe omume ụmụaka
Capital ga-achọ isi ọrụ maka ihe ndị a:
Chgwọ Franchise: £ 7,995 gbakwunyere VAT
Nkwalite ahia: £ 4,000 gbakwunyere VAT
Isi Obodo na-arụ ọrụ: £ 5,000 gbakwunyere VAT (iji kpuchie ego azụmaahịa gị dị ka mkpuchi, ụgwọ ụgwọ, njem, ekwentị wdg na mbido mbụ)
Fgwọ ọnwa maka ọnwa: 10% gbakwunyere vat
Fgwọ Marketinggwọ kwa ọnwa: 2% gbakwunyere vat
Onyinye pụrụ iche 50% kwụsịrị ụgwọ ego Franchise rue ọnwa Disemba 2019 iji bido na Septemba 2020 NA ego njikwa usoro mbụ gị ga-abụ n'efu - ego zuru oke nke £ 6,000. Dịka onye Razzamataz franchisee, ị ga-enweta ngwungwu ọzụzụ zuru oke anyị gụnyere gụnyere ọtụtụ ndị nkuzi eduzi nzukọ ọmụmụ na-egosi:
A na-ekpuchi ọrụ azụmaahịa kwa ụbọchị, ọrụ ndị ahịa, iji ndị nkuzi, ịhazi arụmọrụ ụlọ akwụkwọ na ohere ndị ọzọ.
Okwu banyere nchedo ụmụaka gụnyere nyocha PVG / DBS.
Akaụntụ na Idebe Ihe.
Nkwado PR, Mgbasa Ozi na Marketingzụ Ahịa
Akwụkwọ ntuziaka arụmọrụ na ohere ịnweta weebụsaịtị Weebụsaịtị anyị.
Ohere inweta ọzụzụ mgbe nile
Ohere nke netwọkụ oge niile
Akara Kwa Afọ & Nzuko
Na mgbakwunye, a na-enye ngwugwu mmalite zuru ezu gụnyere:
Nkwado na-aga n'ihu site n'aka Onye isi ụlọ ọrụ na Ndị Nkwado Mpaghara.
Ebe nchekwa data maka mkpa azụmahịa gị zuru ezu.
Peeji dị na webụsaịtị na adreesị ụlọ ọrụ email.
Uwe ndị nkuzi.
Akwụkwọ ihe enyemaka mbụ na akwụkwọ mkpesa ihe mberede.
Ego na nnwere onwe ego! Anyị top na-arụ ọrụ franchisees tụgharịrị ọnụ ọgụgụ isii ma họrọ ọrụ aka ha! Hụ Job n'anya! Bụrụ onye isi gị! Inweta ezigbo ego! Oge ọrụ na-agbanwe agbanwe!